चितवनमा स्थानीयले प्रसारण लाइनमा अवरोध गरे, विद्युत विस्तारमा समस्या ! – Points Nepal
चितवनमा स्थानीयले प्रसारण लाइनमा अवरोध गरे, विद्युत विस्तारमा समस्या !
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष १७, २०७८ समय: १२:०२:१६
चितवन : स्थानीयवासीको अवरो’धका कारण पूर्वी चितवनमा निर्माण गरिएको विद्युत् सब’स्टेशनको लाइन विस्तार हुनसकेको छैन । विगत एक महिना अघिदेखि लाइन विस्तारको तयारी गरिएको भए पनि स्थानीयवासीको अ’वरोधका कारण काम गर्न नसकिएको हो ।
पूर्वी चितवन १३२ केभि आयोजना राप्ती नगरपालिका–६ हर्दी भण्डाराका प्रशासन प्रमुख सुरेश पण्डितका अनुसार सबस्टे’शन निर्माणको काम सम्पन्न भई सकेर सब’स्टेशनबाट चैनपुर सबस्टेशनमा लाइन विस्तारको काममा स्थानीयवासीले अव’रोध गरेका हुन् ।
अवरोधका कारण हर्दी सब’स्टेसनबाट चैनपुर सब’स्टेसनसम्म डबल सर्किट सबप्रशारण लाइन बनाउने काम रोकिएको छ । पुरानो राजमार्गहुँदै लगिने सबप्रशारण लाइनको टावर बनाउने क्रममा स्थानीयवासीले अव’रोध गरेपछि काम रोकिएको हो ।
हर्दीबाट खैरहनी नगरपालिकाको पुरानो राजमार्ग क्षेत्र
१०, ९, ७, ६ नम्बर वडाहँुदै वडा नं २ मा रहेको चैनपुरसम्म प्रशारणलाइन लैजाने गरी सर्वे भएको थियो ।
करिब ८.५ किलोमिटर दूरीमा ४६ वटा विद्युत् टावर बनाएर सर्किट सबप्रशारण लाइन लैजानुपर्ने हुन्छ ।
जसमध्ये अहिले १४ वटामात्र टावर निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ । राप्ती नगरपालिका तर्फका १६ मध्ये १४ टावरमात्रै बनाउनका लागि जग राख्नेकाम सम्पन्न भएको छ । खैरहनीतर्फका ३० टावर बनाउने क्रममा स्थानीयवासीको विरोध गरेसँगै काम रोकिएको हो ।
खैरहनी नगरपालिकातर्फको काम सुरु गर्ने समयमा स्थानीयवासीले १७ बुँदे माग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउँदै प्रशारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।
पुरानो राजमार्ग क्षेत्रको सडक क्षेत्रा’धिकार एकीन नभएको, दर्जनौं बोर्डिङ स्कुल, कलेज छेउमै पर्ने, रोग तथा दुर्घ-टनाको जो’खिम बढ्ने, दूरी लामो हुने भन्दै स्थानीयवासीले काममा रोक लगाएका हुन् ।
हर्दि चैनपुर हाइ’टेन्सन सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी उनीहरुले आफ्नो माग राखेका हुन । सङ्घर्ष समितिका संयोजक केशव भट्टराईले सडकको जग्गामाबिना अनुमति टावर राख्न लागेको हुँदा पछि स्थानीयवासीनै खतरामा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अरु केही भनेका छैनौँ, सडकबाट अनुमति लिएको पत्र देखाउनुहोस् भनेका छौँ ।”
हा’ईटेन्सन लाइनको मुनि भएपछि बैंकहरुको मूल्याङ्क’नमासमेत प्रभाव पर्ने भएकाले स्थानीयवासी समस्यामा परेको उहाँको भनाइ थियो । विसं २०७५ देखि पूर्वी चितवन १३२\_३३\_११ केभी सब’स्टेसन आयोजनाको काम सुरु भएको हो । आयोजना प्रमुख रमनराज शर्माले सबप्र’शरण लाइन तान्ने बाहेका सबै काम पूरा भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार रु ५१ करोड ५१ लाखको लागतमा तयार गरिएको आयोजनाको सबप्रशारण लाइनको काम पूरा गर्न रु तीन करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । अहिले रु तीन करोड ७० लाखको काममा स्थानीयवासीले रोक लगाएका छन् ।
खैरहनी तर्फका टावरको जग राख्ने काम बाँकी रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “घरगोठबाट तीन मिटर पर सडककै जग्गामा टावर बनाउन खोज्दासमेत स्थानीयवासीले काममा रोक लगाए ।” स्थानीयवासीले बिना छलफल काम गरेको भनेर छलफल गर्न माग राखेपछि स्थानीयवासीसँग छलफलमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हाइ–भोल्टेजको नभइ मझौला भोल्टेजको सबप्रशारण लाइन लैजान खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित रुपले अग्ला टावरमा तार राखिने भएकाले हानीनो\_क्सानी केही नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वी चितवनमा लाईन गइरहने समस्या हल गर्नका लागि यो काम पूरा गर्न जरुरी छ ।” भरतपुरबाट ल्याइएको ३३ केभी फिडरलाई केही वर्षपछि देवनगर–गीतानगरमा बन्ने सब’स्टेसनमा पठाइने छ । त्यसपछि चैनपुर सबस्टेसनको विद्युत्को मुख्य स्रोत हर्दी सब’स्टेसन नै बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
चैनपुरबाट करिब २१ किलोमिटर लामो दूरी भरतपुरबाट ल्याइएको एउटा मात्रै ३३ केभी फि’डरमार्फत खैरहनी–२ चैनपुरमा रहेको ३३\_११ केभी सबस्टेसनबाट पूर्वी चितवनमा विद्युत् प्रवाह गरिँदै आएको छ । विद्युत्को माग बढी भएकाले ओभ’रलोड हुने समस्याले भोल्टेज कम हुने, ट्रिप बारम्बार हुने, बेलाबखत विद्युत् अव’रुद्ध हुने समस्या रहेको छ । पूर्वी चितवनमा ६५ हजार बढी ग्राहक छन् ।
Last Updated on: January 1st, 2022 at 12:02 pm